Iindaba -Uyikhetha njani indawo efanelekileyo yokulala esibhedlele kwisigulana
Uyikhetha njani indawo efanelekileyo yokulala esibhedlele
1. Ukhuseleko kunye nozinzo lweebhedi zabongikazi. Umandlalo oqhelekileyo wokonga sisigulana esingakwazi kuhamba kakuhle kwaye silele ebhedini ixesha elide. Oku kubeka phambili iimfuno eziphezulu zokukhusela kunye nokuzinza kwebhedi. Umsebenzisi kufuneka anikezele isatifikethi sobhaliso kunye nelayisensi yokuvelisa imveliso kuLawulo lweziyobisi xa uthenga. Ngale ndlela, ukhuseleko lonyango lwebhedi yabongikazi luqinisekisiwe.
2. Ukusebenza kwebhedi. Iibhedi zokonga zingahlulwa ngombane kunye nezandla. Incwadana ilungele iimfuno zabahlengikazi zexeshana elifutshane kwaye inokusombulula ingxaki enzima yokonga ngexesha elifutshane. Umbane ufanelekile kwiintsapho ezinezigulana ezihlala ixesha elide ebhedini ezinokukhubazeka kokuhamba. Oku akupheleli nje ekunciphiseni umthwalo kubongikazi nakumalungu osapho, kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba abaguli bangabulawula ubomi babo ngokwabo, nto leyo iphucula ukuzithemba kwabo ebomini, hayi ebomini kuphela. Izidingo zomntu zikwanokuzanelisa ngokwamgangatho wobomi, obulungele ukubuyela kwisifo sesigulana.
Okwesithathu, uqoqosho lweebhedi zokonga, iibhedi zokonga zombane zomelele kuneebhedi zokunyanga ezisebenzayo, kodwa ixabiso liphindaphindwe kaninzi lelo leebhedi zokonga, kwaye ezinye zinemisebenzi epheleleyo efikelela kumashumi eedola ezili-15,000. Le nto kufuneka iqwalaselwe kwakhona xa kuthengwa.
4. Amashiti eebhedi zabahlengikazi anezizihlungwana ezibini, izihlwitha eziphindwe kabini izihlungulu ezithathu, iifolokhwe ezine, njl. Njl. Oku kufanelekile kukhathalelo lwempilo lwezigulana ezibuyisa ukophuka kunye nezigulana ezilele ebhedini ixesha elide. Kukulungele ukulala, ukufunda, ukuzonwabisa kunye nezinye iimfuno zabaguli abakhethekileyo.
5. Iibhedi zabongikazi ezinezindlu zangasese kunye nealam zokufuma ezinamashampu okuhlamba izixhobo neenyawo. Ezi zixhobo ziluncedo kukhathalelo lokuzihlambulula oluqhelekileyo lwesigulana kunye nezigulana ezingasebenziyo kumchamo, kwaye ziluncedo ekuchameni kwesigulana nakukhathalelo lokuya.
Itroli yeLaptop, Itroli yesibhedlele, Itroli yeZonyango, Itroli yoNyango ngeeDraw, Inqwelo yeTyoli yoNyango, Itroli yoNesi engenazingcingo,